भारतसँगकाे निर्भरता हट्याे, नेपालकाे चीनसँग पारवहन सम्झाैता ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
भारतसँगकाे निर्भरता हट्याे, नेपालकाे चीनसँग पारवहन सम्झाैता !
काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौता हुने भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालले अब चीनका बन्दरगाहबाट सामान आयात–निर्यात गर्न सक्ने छ । नेपालले अब तेस्रो मुलुकबाट चीन हुँदै नेपालमा वस्तु आयात गर्दा प्रयोग हुने त्यान्जिन, सेन्जेन, लियान्योन्गङ, झ्यान्यिङ लगायतका खुला सामुन्द्रिक र ल्यान्झाउ, ल्हासा, सिगात्सेलगायतका सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने भएको हो। बुधबारदेखि काठमाडौंमा बसेको २ देशका अधिकारीको बैठकले मध्यरातमा ऐतिहासिक सम्झौता गरेको हो । पारवहनका लागि नेपालले चीनसँग मागेका सडक मार्ग र बन्दरगाह उपलब्ध गराउन चीनले सहमति जनाएको छ ।
२ वर्षअघि सन् २०१६ मा व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले नेपालमा बैठक बसेको हो । प्रोटोकल टुंग्याउन २ वटा बैठक यसअघि नै चीनमा भैसकेका थिए । पहिलो र दोस्रो दुवै बैठक चीनमा भएको थियो । सन् २०१६ मा पहिलो र गएको जुनमा दोस्रो बैठक चीनमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा नेपालको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजुले गरेका थिए । यस्तै बैठकमा पराराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी भएका थिए । चीनको तर्फबाट चीनको यातायात विभागमा महानिर्देशक वाङ सिपिङले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए।